Imizuzu yasekhaya ebanzi. ukuya eBeach w/master fireplace
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguHelena
Indlu ephefumlayo kunye neqaqambileyo yelokishi yanamhlanje enobuhlobo kusapho kunye nemizuzu embalwa uqhubela elwandle.
Yonwabela ukutshona kwelanga okuhle ngeefestile ezinkulu zeglasi kwigumbi lethu lokuhlala nekhitshi elitsha elihlaziyiweyo. Indawo yokuhlala inenkqubo yokuzonwabisa epheleleyo kunye neTV enkulu ye-flat-screen kunye nesandi esijikelezileyo-i-Netflix ifakiwe. Ipatio yethu engasemva yetropiki ifakwe ngokupheleleyo kwaye ihonjiswe ngezityalo nemithi yangaphandle.
Eli khaya linefenitshala ngokupheleleyo lineendawo zomlilo ezimbini-enye ikwigumbi lokuhlala kunye nelinye kwigumbi lokulala elikhulu. Igumbi lokulala elihle elihle linombhede wenkosi (Tempur-Pedic topper) elala njengelifu eliqinileyo. I-balcony yabucala evulekileyo ityhila iimbono zenyanga epheleleyo njengoko usiya ebuthongweni obunzulu, kunye necala lentaba eluhlaza njengoko uvuka.
Igumbi lokuhlambela lethu elitsha elihlaziyiweyo linebhafu enkulu eyahlukileyo yokufunxa okusondeleyo, kunye neshawari yodidi olunetephu yamanzi engaphezulu. Yonwabela iisinki ezimbini ezahlukeneyo kunye nendawo eninzi.
Ikhaya linedesika kwigumbi lokuhlala elinazo zonke iimfuno zendawo yokusebenza ekude.
Sinobubele kubantwana, sibonelela ngenkulisa enebhedi kunye nesinxibo. Indawo yokugcina abantwana inebhedi eyongezelelweyo yokutsala.
Iwasha / isomisi ibandakanyiwe kwezo zimfutshane zaselwandle kunye neesuti zokuqubha.
Kufuphi yiSan Clemente Pier edumileyo, iindawo zokutyela ezininzi (kubandakanya iPizza Port edumileyo kunye neSouth of Nicks), kunye nokufikelela kwisaphulelo sika-Uber/Phakamisa enkosi kwi-HOA.
Tsibela kwitroli yasimahla, okanye ukhwele uye eSan Diego okanye eLos Angeles ngeAmtrak ekunene ukusuka kwi-pier.
-Akutshaywa ngaphakathi okanye ngaphandle kwendlu (i-HOA ilawulwa)
-Njengezindlu ezininzi kulo mmandla wetropiki, akukho moya wokupholisa umoya.
Le yindawo ebumelwaneni ekhuseleke kakhulu kusapho enabakhweli beebhayisikile, abahambi ngeenyawo nabahamba ngeenyawo bonwabele induli. Thatha uhambo olufutshane olunyukayo ukuya kwi-Ridgeline trail, apho unokubona ezinye zezona mbono zilungileyo iSan Clemente inokunikezela.